ခံတွင်းအနံ့ဆိုးတွေ ထွက်နေတတ်တဲ့ ပျိုမေလေးတွေ ရှိကြလား – Beauty.mm
ခံတွင်းအနံ့ဆိုးတွေ ထွက်နေတတ်တဲ့ ပျိုမေလေးတွေ ရှိကြလား
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ရဲ့ခံတွင်းအနံ့ မကောင်းဖြစ်နေမလား စိုးရိမ်မိတဲ့အခါမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ကိစ္စရပ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောရတာမျိုးကို လူအများစုကလည်း ရှောင်ကြဉ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ခံတွင်းနံ့မကောင်းဖြစ်နေပြီလား အရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုကိုယ် စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်။ လက်ပေါ် အာငွေ့ပေးလိုက်ပြီး ခဏအကြာမှာ ဘယ်လိုအနံ့မျိုးရှိနေပြီလဲ နမ်းကြည့်ပါ။ လျှာရင်းကို ဇွန်နဲ့ခြစ်ပြီး အခြောက်ခံကာ အနံ့အသက်ကို စစ်ဆေးကြည့်တာမျိုးက ပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ် လက်ကို လျှာနဲ့လျှက်လိုက်ပြီး စက္ကန့်ပိုင်းအကြာမှာ ပြန်နမ်းကြည့်တာမျိုးလည်း လုပ်လို့ရတယ်။တကယ့်လို့ သင့်မှာ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးရှိနေပြီလို့သိရတဲ့အခါ အထိတ်တလန့်မဖြစ်သွားပါနဲ့။ အစောပိုင်းက သင်စားထားတဲ့အစားအစာတွေက အစပျိုးထားလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေအလုံအလောက် မသောက်တာကြောင့်လည်း အခြားအချိန်တွေမှာသင့်ခံတွင်းအနံ့ဆိုးနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေဖို့ စားသုံးတဲ့ အစားအစာတွေကလည်း ခံတွင်းအနံ့ကိုဆိုးစေပါတယ်။ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးတာမျိုးဟာ ဆီးချို၊ ကျောက်ကပ် ဒါမှမဟုတ် အသည်းရောဂါ၊ လည်ချောင်း ဒါမှမဟုတ် အဆုတ်ကူးစက်ရောဂါတို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးတာတွေကို အလွယ်တကူ ဖျောက်စေမဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြပေးမယ်နော်
ကြက်သွန်ဖြူ၊ကြက်သွန်နီတို့ဟာ ခံတွင်းအနံ့ကိုဆိုးစေပြီး သူတို့ကို စားပြီးတဲ့အခါတိုင်း သွားတိုက်ပေးပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး ခံတွင်းအနံ့ဆိုးစေတဲ့ အစားအစာတွေကို သတိထား ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ပုံမှန်ရေသောက်နည်းတာမျိုးက ခံတွင်းအနံ့ကိုဆိုးစေတတ်ပြီး ဘတ်တီးရီးယားပိုးတွေဟာ ခြောက်သွေ့တဲ့ခံတွင်းမျိုးမှာ ပိုလို့ပျော်မွေ့တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့လုံး ရေသောက်ပေးဖို့ ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
သင့်မှာခံတွင်းအနံ့ဆိုးရှိတယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ကို ၁ ကြိမ်နှုန်းသွားတိုက်တာက မလုံလောက်ပါဘူး။ တစ်နေ့ကို ၂ ကြိမ်လောက်တော့ တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ၂ ကြိမ်လောက်တိုက်ပေမယ့် မပျောက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင် အစာစားပြီးတိုင်း တိုက်ပေးပါ။ ဒါပေမယ့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း သွားတိုက်တာမျိုးက သွားကိုယိုင်နဲ့စေပြီး ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ တစ်ကြိမ်လောက် သွားကြားတွေကို ရှင်းပေးပါ။
အစာစားပြီးတိုင်း သွားတိုက်ပေးပါ။ အထူးသဖြင့် ရုံးတက်နေတဲ့အချိန်များမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး အစာစားပြီးတိုင်း သွားတိုက်ပေးပါ။ ပလုတ်ကျင်းဆေးရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းပေးတာကလည်း ခံတွင်းအနံ့ဆိုးကို ပျောက်ကင်းစေနိုင် ပါတယ်။ ခံတွင်းထဲမှာ ပလုတ်ကျင်းဆေးရည်ကို စက္ကန့်၃၀ လောက်ငုံထားပြီးမှ ထွေးထုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ပလုတ်ကျင်းပြီးလို့ မိနစ် ၃၀ အတွင်းမှာ အစာစားတာတို့၊ ဆေးလိပ်သောက်တာတို့လုပ်ရင် ပလုတ်ကျင်းထားတဲ့အာနိသင်ပျက်သွားပြီး နဂိုမူလကို ပြန်ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့အများစုဟာ လျှာကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးထွက်တာဟာ ဒါကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် မနက်တိုင်း လျှာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ လျှာရင်းဟာ အရေးကြီး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် လျှာရင်းထိ ခြစ်တံနဲ့ ခြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အံ့သြဖွယ်ရာ သင့်ရဲ့ ခံတွင်းရနံ့လေး ကောင်းလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေသုံးပေမယ့် မပျောက်ဘူး ဆိုရင် ကိုယ်တွင်းကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီလို့ ယူဆရတဲ့အတွက် ဆရာဝန်ဆီကိုသွားဖို့ မပေါ့လျော့သင့်တော့ပါ။
Our Shop Branches Address
Posted on November 18, 2020 / 0	Categories	tips
Post Author: Beauty.mm
Previous Postနေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရေကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းမလဲ?
Next Postအခုတစ်ခါမှာတော့မှားယွင်းတဲ့ skin care tips တွေကို ပြောမယ်နော်။😍
Promotion Shop One
Promotion Shop Two
Favourite Beauty Spa & Health Care Center
သင့်ဆံပင် အလှက သင့်လက်ထဲမှာပါ။
Spa သွားစရာမလိုဘဲ ခြေထောက်လေးတွေ ဖြူအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ?
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချစ်ပါ။ Skin Careပါ။
ဘယ်လို Lotionမျိုးကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ
အခုတစ်ခါမှာတော့မှားယွင်းတဲ့ skin care tips တွေကို ပြောမယ်နော်။😍